Jery taratra… herinandro : tsy milamina, tsy mitony… | NewsMada
Mby aiza ny raharaham-pirenena amin’izao taona vaovao izao? Adihevitra politika ny amin’ny tokony hanovana na hanamboarana na tsia ny governemanta. Miankina amin’ny filohan’ny Repoblika ny hampilamina izay.
Tsy maintsy miara-mampandroso ny firenentsika isika. Manaraka ho azy ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Rehefa hitany fa mandroso isika, raha ny nambaran’ny filohan’ny Repoblika tany Mahavelona, Toamasina.
Anjaran’ny Malagasy ny ady amin’ny kolikoly sy tsy fahombiazam-pitantanana, raha ny filazany teny Soavina Tanjombato. Mila jerena ny lafiny fitantanana, izay miankina amintsika fa tsy noho ny vola na ny vahiny.
Mbola mitohy ny fitrandrahana sy fanondranana tsy ara-dalàna ny andramena, raha ny fijerin’ny mpikirakira serasera eo anivon’ny Masoivoho amerikanina eto Madagasikara. Toy izany koa ny fisian’ny kolikoly.
Olona akaiky na tomponandraiki-panjakana ambony no mpitrandraka sy mpanondrana tsy ara-dalàna andramena, araka ny fanambaran’ny fikambanan’ny injenieran’ny ala ary ny firaisamonina sivily amin’izany.
Tsy mijanona kosa ny fitarainana momba ny fifidianana loholona farany teo: nisy ny fanerena sy fividianana mpifidy vaventy, raha ny filazan’ny kandidà sasany avy any Mahajanga. Ho tonga hatraiza ny fitoriana tsy mampitony amin’izany?
Nahabe resaka ny amin’ny nahavotsotra soa aman-tsara an’i Arnaud, nalaina sy notanan’ny sasany an-keriny tany Toamasina nandritra ny 50 andro. Iza no tena tao ambadiky ny raharaha, an’iza na avy aiza ny basy… ?
Ho hita eo… Am-boalohany ihany sa tena haharitra ny fandaminana sy fanadiovana an’Antananarivo Renivohitra? Misy hatrany ny fangala-piery amin’ny mpivarotra amoron-dalana mitady izay ivelomany… isan’andro.
Tsy fangala-piery no ataon’ny sehatra sy mpamatsy vola iraisam-pirenena amin’ny tokony hampiharana ny fanjakana tsara tantana, ady amin’ny kolikoly… Mba tena handeha amin’izay nanomezana azy ny fanampiana.
Tsy mbola marin-toerana sy milamina ny fitantanam-panjakana amin’izany? Na ny politika, toekarena, sosialy…